Ngwanrọ nlekota netwọkụ | Motadata
Ngwa Nlekota Onu Network
Nweta nghọta n'ime igwe ojii, On-prem na akụrụngwa IT ngwakọ na Scale.
Jiri dozie nsogbu netwọkụ
Nleba anya netwọkụ nke ọgbọ na-abịa
Gbajie silos data wee nweta nhụta njedebe na njedebe nke arụmọrụ netwọkụ gị, data SNMP, Flow Network na data ndekọ. Nyochaa ma nyochaa netwọkụ gị nke ọma n'ofe ụlọ ruo akụrụngwa igwe ojii.
Ọhụụ n'ime data gị
Ma igwe ojii ma ọ bụ akụrụngwa ngwakọ, weghara ọnụọgụ ịkwọ ụgbọ mmiri na-abawanye, data okporo ụzọ iji chọpụta ihe adịghị mma na-emetụta ebumnuche azụmahịa gị.
Metric: Weghara metrik dị oke egwu ma mee mkpọ-ala.
okporo ụzọ: Sochie itinye n'ọrụ site na ntinye gaa na ọpụpụ site na usoro netwọkụ.
nsochi usoro: dozie nsogbu ngwa ngwa tupu ha emetụta arụmọrụ.
ndekọ: Tụgharịa na ndekọ nke ngwaọrụ netwọk gị maka nghọta nwere ike ime.
Otu Platform. Ikike ọzọ. Nhụta zuru oke
Nweta ịdị n'otu, nleba anya na nyocha nke igwe igwe na-akwado, n'ofe akụrụngwa ngwakọ gị nke gụnyere ngwaọrụ netwọkụ, ike, ngwa, na igwe ojii Infra.
Nleba anya arụmọrụ ọrụ netwọk: Mụbaa ogo ọrụ nke netwọkụ gị site n'ịmepụta n'ụzọ ziri ezi data na-erugharị n'etiti ọnụ ọnụ yana ịchọpụta ihe adịghị mma tupu ha aghọọ nsogbu.
Nyochaa okporo ụzọ, ụzọ ụzọ na ahụmịhe onye ọrụ njedebe: Chọpụta ngwa ngwa oge nzaghachi na-egbu oge na okporo ụzọ na ngwa ndị ahịa.
Debanye aha nyocha na gburugburu: dozie nsogbu ngwa ngwa tupu ha emetụta arụmọrụ.
ndekọ: Nweta nghọta ozugbo na usoro sitere na ndenye ndenye ngwaọrụ netwọkụ.
Ewuru iji chọpụta ihe a na-apụghị ịchọpụta - Ihe omume
Isi ihe kpatara AI-Engine anyị na-achịkọta isi data, na-arụ ọrụ mmekọrịta ma na-esepụta eserese, yabụ ị nwere ike nweta azịza kacha mma maka ihe kpatara ụfọdụ ihe mere.
Map ndabere: Nweta nghọta zuru oke na nzikọrịta ozi n'etiti ọrụ, usoro ojiji ngwa na mmemme dị oke egwu.
Nchọpụta akpaaka: Na-achọpụta ihe ọhụrụ - na-enweghị nkwado igbe maka Cisco, Palo Alto, F5, HP, Fortinet, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nghọta bara ụba: Belata mkpọtụ data maka nghọta ka mma na igwe mmụta dabere na igwe.
Nweta ọhụhụ n'ofe netwọkụ gị site na iji maapụ topology.
Mkpu maka mfu nke nnweta.
Na-enye nlekota oru netwọk.
Na-enye nlebanya netwọkụ nzuzo mebere (VPN).
inyocha Ihe nleba anya netwọkụ
Ejiri teknụzụ dị mkpụmkpụ dị ka AI na ML wuru Network Observer site na Motadata, na-eme ka ọ bụrụ otu smart na onye na-ahụ maka netwọkụ dị elu n'etiti ndị ọzọ n'ahịa ahụ.
Gịnị bụ Network Observability?
Network Observer bụ ngwa nleba anya nke na-eleba anya na netwọkụ ụlọ ọrụ niile yana ngwaọrụ ejikọrọ, na-eme ka ndị otu nchịkwa mara ma ọ bụrụ na ọdịda ọ bụla dara, na-edobe ahụike netwọkụ ahụ ma na-eme ka ọ na-arụ ọrụ.
Kedu ihe kpatara ịchọrọ onye na-ahụ maka netwọkụ?
Na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ngwaọrụ na ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-esiri ike nyochaa ha ma hụ na iji bandwidth eme ihe. Nke a na-etinye nnukwu nrụgide na ndị otu IT ka ha mee ka ihe dị mma ma dozie ọnụ ụzọ. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, ọ ka mma ịnweta Network Observer n'aka, nke nwere ike ịdị mma ma dozie nsogbu ndị ahụ tupu ha emebi ihe ọ bụla ma nọgide na-ahụkwa ahụike netwọk n'ozuzu ya.
Kedu ihe ị ga-eleba anya na ezigbo onye nlekota netwọkụ?
Onye na-ahụ maka netwọkụ smart kwesịrị inwe ike ịkọrọ ndị otu nchịkwa maka ọnọdụ ngwaọrụ niile ejikọrọ, ebe ha nọ, ojiji bandwidth, ahụike netwọkụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na-ekwurịta okwu na ngwaọrụ netwọk site na SNMP, na usoro ọgụgụ isi na-echekwa usoro ahụ site na mmebi.